Mareykanka Oo Cambaareyn Dusha Uga Tuuray Tacaddiyo Ka... - Wararka Maanta
Home/Warka Caalamka/Mareykanka oo Cambaareyn Dusha Uga Tuuray Tacaddiyo Ka…
Mareykanka oo Cambaareyn Dusha Uga Tuuray Tacaddiyo Ka…
WASHINGTON(WararkaMaanta)-Mareykanka ayaa cambaareeyay tacaddiyo la sheegay in ay ka dhaceen gobolka Tigray isla markaana wuxuu ugu baaqay Midowga Afrika inay xal u raadiyaan xaaladda sii xumaaneysa ee ka taagan gobolkaas.
“Waxaan si weyn uga walaacsanahay xaaladda banii’aadimo ee kasii dareysa” ayuu yiri Anthony Blinken oo ah xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka.
Wuxuu soo dhaweeyay ballanqaadka dowladda Itoobiya ee ku aaddan in ay taageereyso gargaarka loo fidinayo shacabka Tigray iyo baaqyada caalamiga ah ee ku saabsan in la baaro tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka.
Warbixin kasoo baxday Ha’yadda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in ay dhici karto in dambiyo dagaal la geystay Tigray.
Amnesty ayaa ku eedeysay ciidamada Eritrea in boqolaal qof ay ku dileen magaalada qaddiimiga ah ee Aksum intii u dhexeeysay 28-dii iyo 29-kii bishii Nofeembar.
Dowladda Eretariya ayaa beenisay eedeymo ku saabsan in militarigeeda ka dagaallamaya gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ay dileen boqollaal qof oo ku sugnaa magaalada caanka ah ee Aksum.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa horraantii bishii Nofeembar amar ku bixiyay in dagaal lagu qaado gobolka Tigray oo ay maamulkiisa gacanta ku hayeen xisbiga TPLF, kaddib markii xoogaggooda ay qabsadeen saldhig ay gobolkaas ku lahaayeen militariga federaalka.
30-kii bishii Nofeembar ayuu baarlamaanka u sheegay in aan hal qof oo shacab ah la dilin intii uu howlgalkaas socday.
Adeeggii isgaarsiinta iyo korontada oo ka go’naa gobolkaas ayaa suurtagalin waayay in warar madax bannaan laga helo dagaalka.
Cambaareyn Dusha Mareykanka tacaddiyo Tuuray uga
Somaliland: Olole Dadka Lagaga Baadhayo Covid-19 Oo...
Madaxda Liverpool oo shaki ka qaba mustaqbalka dheer ee...